Ma muqlaysanyihiin qab-qablayaasha Muqdisho?
Akhristayaal, Muctasim oo ahaa Amiirul Muuminiin ayaa ku soo booqday nin xanuunsan gurigiisa. Muctasim baa waydiiyey wiil yar oo ninkaasi dhalay midka fiican daarta Amiirka Muuminiinta iyo tan aabbihiis? Wiilkii wuxuu yiri haddii Amiirku joogo daarta aabbahay, waxaa fiican daarta aabbahay!
Haddaba akhiristayaal qaq-qablayaasha Muqdisho waxay u haystaan ururka uu C/hi ku jiro kan ugu fiican ururada. Waxaan ogayn in mar sii horraysay Xuseen Caydiid iyo Cismaan Caato booqdeen Garoowe iyagoo raadinaya la-jirka C/hi. Xuseen Caydiid ilaa waagii waa la-jiraa oo waxay isku-raaceen in Soomaaliya ay joogeen argagixiso laakiin Caato taas waa ku khilaafay. C/Qaasim isna wuxuu warqad u soo qoray C/hi si ay u heshiiyaan oo wax-u-qaybsadaan bilowgii shirkaan. Waxaa mar suuqa la gashay in ay Itoobiya isku arkeen markii C/Qaasim Adisababa tagay iyadoo C/hi maalmo labo maalmood ku dhowayd laga waayey Eldoret laakiin taageerayaasha C/hi waxay sheegeen in uu martiqaad u jiray Kisumu.
Dhallaanku waxay ku sheekayn jireen qofkii raba in faalaloowgu sixirka baro wuxuu ku oran-jiray ku fool-dhaqo kaadi. Qofkii yeela wuxuu ahaa qof u diyaara inuu sixir barto iyo haddii xittaa gaalnimo loogu yeero.
Waxaad mooddaa hadda in qab-qablihii reer Muqdisho oo raba inuu helo saaxiibtinimada C/hi uu kornaylku leeyahay waa inaad soo xirtaa nin Carbeed oo aad Maraykan ama Yuhuud u gaysaa. Sidaan la socono waxaa taas yeelay Maxamed Dheere oo af-duubay nin dhaawac ah oo Carbeed oo ku jiray isbitaal Xamar oo u gacan-gashay Yuhuud iyo Maraykan. Bedelkeedii Maxamed Dheere wuxuu helay saaxiibtinimada kornaylka.
Waxay ugu darnayd markii boggagga Soomaalidu ay dhowaan soo qoreen in Qanyarana Dayniile ku xirtay nin Carab ah isagoo la arkay in uu isla maalmahaasba ay isku soo dhawaadeen C/hi. Waxaa la sheegay in ninkaas loo waday in loo dhiibo cadow waxaa kaloo la sheegay in haweentii uu ninkaasi qabay dacwo ahayd marka hadda ma garanayo meeshay ku dambaysay arrinta ninkaasi.
Maxamed Qanyare wuxuu joogay xafladdii lagu heshiisiinayey Shaati-guduud iyo Sheekh Aadan Madoobe. Runtii heshiis waa loo baahanyahay hadduu dhab ka yahay laakiin markaan ka hadalno arrinta Qanyare waxay i xassuusisay mar uu gabyaagii Dharbaaxo-Jaan oo ka soo jeeday beesha ugu badan Waqooyiga Soomaaliya uu gabay isku xijiyey Maxamed Siyaad isagoo ku nacaynaya Khaliif Shiikh Maxamuud oo markaas Kulmis ka mid ahaa oo ka soo jeeda Bari. Erayadii Dharbaaxo-Jaan (Runtii ma aqaan magaciisa saxda ah) waxaa ka mid ahaa isagoo haysta Maxamed Siyaad:
Haddaan Diini magantiisba nahay ama Mareexaan ba
Nama midab-takoorshoo xaquu noo mitihiyaaye
Mataano iyo waxaan nahay dad aan kala maqnaanayne
Khaliif isna wuxuu yiri:
Intaad Diini magantiis tahoo daba-mushaaxayso
Daaroodka moolkaa intaad mid uun ku biirayso
Nacasyahow maqiiqani maxaa adiga kuu meel ah.
Hadda Maxamed Qanyare dhib malaha inuu RRA heshiisiiyo laakiin meeday Magaaladii uu moodkeedii iyo dadkeediiba mariyey, Muqdisho? Waatee magaalada maanta Muqdisho uga baahi-badan nabadda? Reer tolkaa maa la heshiisid?
Maxaa loo furi la�yahay dekedda iyo gegiga diyaaradaha ee Xamar?
Sidaas la socotaan Qanyare wuxuu ku jiray Carta halka Muusi Suudi uu hor-is-taagay Carta. Maxay ku dhacday in Muuse Suudi iyo C/Qaasim u olaleeyaan furidda dekedda iyo garoonka halka Qanyare iyo Maxamed Dheeraba ka diideen? Aniga ra�yigayga waxay iila muuqataa in Qanyare uu haysto garoonka Dayniile, waxay la tahay haddii kan Xamar la furo in uu waayi doono nacfi, sharaf iyo maamul uu ku haystay garoonkaas. Sidoo kale Maxamed Dheere waxay saaxiib yihiin ama isku dhowyihiin Bashiir Raagaha leh dekedda Ceel-macaan. Iyagana waxay la tahay in haddii la furo dekeda wayn ee Muqdiho ay sidoo kale waayi doonaan waxay taas ku haysteen.
Run ahaantii waxaan ku talin lahaa in garoonka diyaaradaha ee Xamar loo dhiibo Maxamed Qanyare dhowr sababood darteed:
1. Isagoo ka mid ah qab-qablayaasha Xamar, dad badana u arkaan inuu fahmi karo qab-qablayaasha badankooda.
2. In qabiilka uu ka dhashay tabanayaan in laga sad-bursaday
3. Iyo isagoo haysta garoon kale oo badanaa ay istimaalaan dadka Xamar deggeni.
4. Iyadoo keenta in dadweynaha Xamari ka faa�iidaystaan garoonkaas.
Sidoo kale dekedda madax looga dhigo Bashiir Raage iyo Maxamed Dheere sabibihii aan kor ku sheegay oo kale ama u dhow. Kama wado nimankaasi ha qaateen dekedda iyo garoonka ee waxaan leeyahay ha u sarreeyeen si ay sharafna ugu helaan dadka kalana uga faa�iideeyaan. Lacagaha ka soo baxa labadaas ilood ayaa wax badana ka badan san-dareero laga qaato cadowga Soomaaliyeed.
Marka C/Qaasim, Muuse Suudi iyo kuwa kalaba waxay helayaan sumcad oo iyagaa nimankaas meesha saaray kaddibna waxay u sarreeyaan maamulka Xamar, shabeelooyinka iyo iyagoo gacan-saar la leh dooxada Jubba.
Markay Xamar degto waxaa la rabaa in laga xisaabtamo hantidii dadweynaha Soomaaliyeed ee laga baro-kacshay Koonfurta Soomaaliya iyo in qof walba loo cesho wixiisii. Marka Koonfur oo saan u qasan oo qab-qablayaashii is-haystaan, dadweyne kale xaq ma helayo. Marka taladaan waa talo sahlan oo habayn kaliya la samayn karo. Markaas reer Xamar oo mid ah ha u yimaadaan Soomaalida kale.
Haddii maqaalkaan uu faah-faahin u baahdo waan ka bixin doonaa haddii Allaha awoodda lihi ogolaado.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 25, 2003